Thịt bò xào gì ngon nhất? Cách xào thịt bò ngon và đầy dinh dưỡng | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Thịt bò xào gì ngon nhất? Cách xào thịt bò ngon và đầy dinh dưỡng | Excitinghochiminhcity
Nyama yemombe yakakangwa kunoratidzika kuva kudya kunokosha kubetsera kupfumisa zvokudya zvemhuri. Saka unotoziva Chii chakanaka nezvenyama yemombe yakakangwa? zvakanakisisa? Ngati Digifood Tsvaga iyo yakanyanya kunaka nyama yemombe inosimudzira-fry mabikirwo mune ino chinyorwa!
1 I. Ndeipi nyama yemombe yakakangwa yakanakisa? Zvokudya zvemombe zvinonaka uye zvinovaka muviri
1.1 1. Nyama yemombe yakakangwa nemiriwo
1.1.1 1.1 Nyama yemombe yakakangwa nemvura sipinachi
1.1.2 1.2 Nyama yemombe yakakangwa nemhiripiri
1.1.3 1.3 Nyama yemombe yakakangwa ne broccoli
1.1.4 1.4 Nyama yemombe yakakangwa nembatatisi
1.1.5 1.5 Nyama yemombe yakakangwa nekudedera
1.2 2. Mushenjere wakakangwa nenyama yemombe
1.2.1 2.1 Asparagus yakakangwa nenyama yemombe
1.2.2 2.2 Mushenjere wakakangwa nenyama yemombe
1.2.3 2.3 Nyama yemombe yakakangwa ine nhungirwa dzeshenjere
1.3 3. Nyama yemombe yakakangwa nehowa
1.3.1 3.1 Nyama yemombe yakakangwa nehowa uye zvidya zvehuku
1.3.2 3.2 Howa hweabalone hwakakangwa nenyama yemombe
1.3.3 3.3 Nyama yemombe yakakangwa nehowa inoki
1.3.4 3.4 Nyama yemombe yakakangwa nehowa hweshiitake
1.4 4. Nyama yemombe yakakangwa nesatay
1.5 5. Nyama yemombe yakakangwa ne kimchi
1.6 6. Svondo dzakakangwa nenyama yemombe
1.7 7. Svondoga yakakangwa nenyama yemombe
1.8 8. Yakakangwa nyama yemombe inotapira uye inovava
1.9 9. Musanganiswa wemombe yakakangwa
1.10 10. Soup yemombe yakakangwa
2 II. Nzira yekukuchidzira-fry nyama yemombe inonaka uye zvaunofanira kuziva
2.1 1. Ungasarudza sei nyama yemombe yakakangwa
2.2 2. Nzira yakanakisisa yekubika nyama yemombe yakakangwa
2.3 3. Kugocha nyama yemombe nyoro pasina kutsenga
I. Ndeipi nyama yemombe yakakangwa yakanakisa? Zvokudya zvemombe zvinonaka uye zvinovaka muviri
Nyama yemombe yakasanganiswa nemiriwo kana zvimwe zvinhu zvakasikwa isarudzo yakanaka yekudya kwemhuri. Iwe unogona kushandisa ndiro idzi kuti uchinje kuravira!
1. Nyama yemombe yakakangwa nemiriwo
Kana usingazivi Chii chinonaka nenyama yemombe yakakangwa nemuriwo? Ipapo iwe unogona kukurumidza kutarisa kune mashoma mazano pazasi:
1.1 Nyama yemombe yakakangwa nemvura sipinachi
Nyama yemombe yakakangwa ine sipinachi yemvura idhishi isinganyanyo shamisa mutireyi yemupunga yemazuva ese yemhuri zhinji dzeVietnamese. Kuti chikafu ichi chive chinonaka, sipinachi yemvura inofanira kunge yakasvibira, yakatsvuka uye isina kusvibiswa panguva yekugadzira. Kutanga, iwe unoisa nyama yemombe yakakanyiwa uye fambisa-fry nekukurumidza nekupisa kukuru kusvikira yabikwa, wozoiisa pandiro. Wotora sipinachi yemvura woisa mumvura iri kufashaira. Bvisa kunze, wobva wanyura mumvura yechando inotonhora yemiriwo inopenya uye yakasvibira. Ramba uchipisa garlic, wedzera sipinashi yemvura uye fambisa-fry pakupisa kukuru. Rongedza kurunga kuravidza. Kana miriwo iri crispy, wedzera nyama yemombe uye fambisa zvakanaka, wozodzima chitofu.
1.2 Nyama yemombe yakakangwa nemhiripiri
Imwe pfungwa kana usingazivi kuti chii chinonaka chemombe yakakangwa, imombe yakakangwa ine mhiripiri. Nyama yemombe inonaka yakasanganiswa netsvuku uye girini bhero mhiripiri inonyatso kufadza maziso. Iyo inonaka inoita seinopisa uye inonhuwira, asi inotapira uye inoshamisa kwazvo. Iyo nzira zvakare iri nyore, geza bhero mhiripiri, dhonza uye wochekeresa areca. Zvadaro saute ginger negariki uye wobva wawedzera nyama yemombe uye fambisa-fry pakupisa kukuru. Nyora-yakakangwa nyama yemombe kusvika yaibva, wedzera bhero mhiripiri, simbisa nekukurumidza. Mwaka kuravira wobva wadzima moto. Unofanira kuidya ichiri kupisa kuitira kuti nyama yemombe isanyanye kutsenga uye chilipi chisanhuwa.
1.3 Nyama yemombe yakakangwa ne broccoli
Chii chakanaka nenyama yemombe yakakangwa? Ehe, zvakakosha kune broccoli. Iwe unofanirwa kusarudza kutenga broccoli ine yakasviba girinhi ruvara, yakasimba uye kunyange donje pamusoro. Nzira yekusimudzira-fry iri nyore kwazvo, unofanira kumutsa-fry nyama yemombe kutanga uye ipapo broccoli. Zvadaro sanganisa-fry pamwe chete uye wozodzima moto. Nekudaro, zano rekuita kuti broccoli ive yakasvibira uye crispy ndeyekusuka broccoli nemvura inopisa uye woisuka zvakare nemvura inotonhora.
1.4 Nyama yemombe yakakangwa nembatatisi
Nyama yemombe inowanzoshandiswa pamwe nembatatisi mune yakajairika nyama yemombe. Panguva ino, edza kushandura zvinhu zviviri izvi zvakasiyana kuti ugadzire nyama yemombe yakakangwa ine mbatatisi. Yakachekwa nyama yemombe kuita zvidimbu zvakakura. Shingairira-fry kusvika kunhuhwirira nembatatisi dzakachekwa. Chikafu chine kunhuhwirira kwakasiyana nekunaka kubva kunyama yemombe. Yakasanganiswa ne sweet potato starch, mafuta uye mafuta. Ichi chikafu chichaita kuti iwe ude murudo kubva pakuravira kwekutanga.
1.5 Nyama yemombe yakakangwa nekudedera
Nyama yemombe yakakangwa ine shakes chikafu chinonaka chiri nyore kugadzira. Nyama yemombe yakacheneswa, yakachekwa kuita mativi akaenzana. Wedzera sauteed garlic kwemaminetsi matatu. Wedzera hanyanisi uye bhero pepper uye simbisa. Nguva yekuravira, shongedza nehanyanisi yakasvibirira uye isa pandiro.
2. Mushenjere wakakangwa nenyama yemombe
Kune akawanda marudzi emushenjere nhungirwa anogona kusanganiswa nenyama yemombe yakakangwa. Iwe unogona kuona tsanangudzo dzendiro Tsvina-yakakangwa bamboo nenyama yemombe kana nekukurumidza tarisa kune mashoma mazano pazasi:
2.1 Asparagus yakakangwa nenyama yemombe
Asparagus yakakangwa nenyama yemombe izano rakanaka kwauri kana iwe uchiri kuziva zvinonaka nenyama yemombe yakakangwa. Asparagus inofanira kusarudza madiki, akatetepa kumusoro, bamboo nhungirwa haana fibrous. Mushure mekutenga, nyura nemvura yakanyungudutswa yemunyu kuti ubvise tsvina yose. Cheka chikamu chakaoma chiri kumagumo edzinde, wochipatsanura kuita machunks ane hukuru hwekuruma. Zvadaro, fambisa-fry nemombe. Nyama yemombe yakapfava, kwete kutsenga, ine iron yakawanda. Yakasanganiswa necrispy asparagus, inowedzera mavitamini uye fiber inodiwa kuvanhu. Zvirokwazvo ichave zano rakakwana rekudya kwemhuri yako.
2.2 Mushenjere wakakangwa nenyama yemombe
Bamboo shoots vane kutapira kunotapira, kusanganiswa nekunaka kwenyama yemombe, kugadzira ndiro iyo yakaoma kuramba. Bamboo shoots chinhu chakaoma kutora zvinonhuwira, saka iwe unofanira kutanga watanga kufambisa nyama yemombe, kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchichichidzira zinaweza kugadzira “offset” yekunaka. Kana ndiro yacho yakabikwa, yeuka kuwedzera hanyanisi uye cilantro kuti iwedzere kutaridzika uye inotenderera. Kudya uku kunodyiwa kana kuchipisa kunzwa kunaka.
2.3 Nyama yemombe yakakangwa ine nhungirwa dzeshenjere
Iyo zvakare yakakangwa nyama yemombe ine bamboo nhungirwa, asi yakavava bamboo nhungirwa inounza zvakasiyana uye yakakosha kunhuwirira nenzira yayo. Iyo yakapfava inovava kuravira kwe bamboo nhungirwa ichaita kuti ndiro iwedzere kutetepa, muzhizha rinopisa, iyi isarudzo yakakwana. Nyama yemombe yakakangwa ine nhungirwa neshanje inonaka kana wawedzera chilli nehanyanisi dzegirinhi.
3. Nyama yemombe yakakangwa nehowa
Iwe unogona kushandisa marudzi akasiyana-siyana ehowa kumutsa-fry nemombe. Ona rondedzero yendiro Nyama yemombe yakakangwa nehowa kuita kana kutarisisa nekukurumidza mazano mashoma pazasi:
3.1 Nyama yemombe yakakangwa nehowa uye zvidya zvehuku
Huku chidya howa inozivikanwa se “mambokadzi wehowa”, kuunza yakawanda kukosha kwekudya uye kubatsira kugadzira chikafu chinonaka kuunza mupunga kumhuri yega yega. Iyo ndiro kana yapedza kubika ichava nekunhuhwirira kwakareruka kwehowa yakasanganiswa nekunhuhwirira kwe cilantro. Paunenge uchidya nyama yemombe yakapfava, inonhuhwirira, crispy howa, kana ukaicheka zvishoma, iyo yakawanda yekudyara ichabatwa. Yeuka kuidya iyo ndiro ichangobva kubuda muchoto, zhizha kana chando kudya ndiro iyi yakakodzera chaizvo.
3.2 Howa hweabalone hwakakangwa nenyama yemombe
Howa hweAbalone hune hunhu hwekunhuhwirira, saka kana hukabikwa nenyama yemombe, hunogadzira chikafu chisinganzwisisike. Howa dzinewo zvakawanda zvinovaka muviri, nokuda kwezvokudya zvinonaka unofanira kusarudza howa dzinokura mumasumbu, matsva. Kana yabikwa, nyama yemombe inodimburwa kuita zvidimbu zvitete, zvoiswa murungi zvishoma zvekuti kana yakakangwa, muto unopindirana nenyama nehowa. Ichi chikafu chakanakira mazuva ekupisa kwezhizha.
3.3 Nyama yemombe yakakangwa nehowa inoki
Kana iwe uchinetseka kuti ndechipi chinonaka chakakangwa nyama yemombe iri pakati pemazana ezvigadzirwa, howa dze enoki ndiyo sarudzo yakakwana. Crispy howa hutsva, zvisinei kuti uhubika kwenguva yakareba sei, havazorasikirwe nekunaka kwavo kwekuzvarwa uye crunchiness. Kunyanya ndiro iyi haitore nguva yakawanda yekugadzirira. Mhou uye howa zvinongoda kubikwa, maminitsi gumi ndiro inonaka yezuva reusimbe.
3.4 Nyama yemombe yakakangwa nehowa hweshiitake
Shiitake howa ane kuravira kunonaka, kushumirwa nenyama yemombe yakapfuma musanganiswa wakakwana. Paunenge uchidya nehowa hweshiitake, unogona kusanganisa nemhiripiri, herbs kana kumwaya nesesame chena. Kufanana nehowa hweshiitake, howa hweshiitake hunongoda kukangwa chete kusvika hwave crispy uye kutapira.
4. Nyama yemombe yakakangwa nesatay
Kana iwe uri timu inoda chikafu chinonhuwirira, saka haufanire kubvunza kuti chii chinonaka chakakangwa nyama yemombe, asi iwe unogona pakarepo kuwana yakakangwa yemombe satay. Iwe unofanirwa kufanorovera nyama yemombe ne satay kuitira kuti nyama yemombe igone kutora kunhuhwirira uye kuunza ruvara rwakanaka kana yakakangwa. Unogona kuzvigocha sezvazviri kana kuwedzera hanyanisi kana mimwe miriwo kuitira kuti usafinhwa. Nyama yemombe yakakangwa ine satay ine zvinonhuwira zvishoma, zvakasanganiswa nekutapira kwenyama yemombe. Kana nyama yemombe yabikwa, inenge ichine imwe kuoma, kana yadyiwa nemupunga unopisa, inonaka.
5. Nyama yemombe yakakangwa ne kimchi
Chimwe chikafu chinonaka chevanhu vanorunga nyama yemombe yakakangwa nekimchi. Kuita kuti ndiro yacho inake uye inonaka, unofanira kusarudza yakanakisa mhando yekimchi. Iyo kimchi yakasviba zvishoma ichaenzanisa kunaka kwemombe. Iri ndiro zvakare rakareruka, iwe unongoda kucheka nyama yemombe kuita zvidimbu zvitete, marinate nechinguva chidiki. Kimchi akacheka kuita zvidimbu zvakakura, fambisa-fry nyama yemombe kweanenge maminetsi mashanu kutanga, wozoisa kimchi mukati uye fambisa-fry kwemaminitsi matatu. Iwe unongoravira uye wobva wawedzera scallions, cilantro, herbs sezvaunoda.
6. Svondo dzakakangwa nenyama yemombe
Nui ndechimwe chezvinhu zvinozivikanwa zvinodikanwa nemhuri yese yeVietnamese. Soup yakakangwa nenyama yemombe inowanzova chikafu chemangwanani kana chikafu chinokurumidza pamazuva akabatikana. Iri ndiro rinokurumidza kubika, ingofanogeza ma noodles nemvura inopisa. Nyama yemombe inogona kuchekwa kana kuchekwa zvitete, wowedzera madomasi kuti anakidze. Manoodles anotsenga uye anotsenga, nyama yemombe inotapira uye inonhuhwirira ine muto wematomatisi. Ndiro yema noodles yakakangwa nemombe pazuva idzva ichakupa simba rakawanda!
Mufananidzo: Wife’s Kitchen
7. Svondoga yakakangwa nenyama yemombe
Kuenderera mberi kuve chikafu chinoyevedza chemangwanani chezvikwata zvine usimbe zvinoda kukurumidza asi zvinonaka. Kugadzira noodles dzakakangwa, anenge munhu wese anoziva kugadzirira, chete panguva ino iwe uchadya nemombe yekudya kunovaka muviri. Chinhu chakakosha ndechekuti ma noodles ane nzara kwazvo, asi kana asanganiswa nemombe, anoguta kwenguva yakareba. Unogona kuidya nezvimwe zvinhu zvakaita semazai, hanyanisi, bhero mhiripiri, cilantro…
8. Yakakangwa nyama yemombe inotapira uye inovava
Chii chinonaka chemombe chakakangwa pasina kufinhwa? Mhinduro yakakwana kwauri inotapira uye inovava nyama yemombe. Iyo ndiro inodiwa nevakuru nevana. Chigadzirwa chinonaka chakapedzwa ndiro ndiro yemombe ine ruvara rutsvuku rwakanaka uye mafuta anonhuwira ingwe. Kana yadyiwa, ine muto unotapira uye unovava, kupfava uye kutsenga kwenyama yemombe. Unogona kutenga sosi dzakagadzirirwa kana kushandisa tomate. Uye maererano nenzira iyo mhuri dzakawanda dzinodya nayo, nyama yemombe inotapira uye inovava ichava yakanyanya kunaka kana ukawedzera pineapple shoma.
9. Musanganiswa wemombe yakakangwa
Kana zvakanyanya kuoma kusarudza chinhu chaunofarira, unogona kuita nyama yemombe inokurudzira-fry. Iko kusanganiswa kwezvinhu zvakawanda pamwe chete kunoita kuti ndiro isafinha uye inogona kuchinja zvakasununguka kuravira. Zvichienderana nezvido zvemhuri yako, unosarudza zvinhu zvinosanganiswa pamwe chete. Unogona kudoma mhando shoma dzakadai se: howa, matomatisi, cauliflower, muriwo, gariki, bhero mhiripiri, makabheji…
10. Soup yemombe yakakangwa
Beef noodle soup idishi rinofarirwa nevanhu vazhinji. Iyo nzira zvakare iri nyore kwazvo, yakatonyanya hupfumi kupfuura kana iwe uchidya kunze. Noodles dzakapfava, dzakanyoroveswa muzvinonhuwira, dzinoshandiswa nemafuta uye nyama yemombe inonhuhwirira. Pachave nenzira dzakawanda dzekunakidzwa nendiro iyi, unogona kumutsa-fry kuburikidza nemombe kusanganisa nevermicelli uye muto. Kana kusanganisa zvinhu zviviri izvi pamwe chete uye simbisa-fry. Chero nzira inonaka uye iri nyore kugadzira, saka dzidza kuzviita ipapo ipapo!
II. Nzira yekukuchidzira-fry nyama yemombe inonaka uye zvaunofanira kuziva
Mubvunzo wekuti chii chinonaka chemombe yakakangwa ine mhinduro, asi izvo hazvina kukwana. Kuti uwane mhedzisiro yakanakisa, haufanirwe kufuratira mashoma matipi pazasi.
1. Ungasarudza sei nyama yemombe yakakangwa
Sarudza nyama yemombe itsva, usasarudza nyama tsvuku yakasviba. Mafuta emombe ndeyero uye akaoma, usasarudza nyama ine mafuta akapfava.
Paunenge uchitenga nyama yemombe iwe unoteerera kune elasticity yenyama, edza kudzvanya pasi pachidimbu chenyama kana ichidzokera kune yayo yekutanga, inyama nyowani.
Inofanira kusarudza nyama yemombe, nyama yemombe yekukurudzira-fry ichava inonaka.
2. Nzira yakanakisisa yekubika nyama yemombe yakakangwa
Kugadzira nyama yemombe: Nyama yemombe yakashambidzwa nemvura ine munyu yakanyungudutswa, yakanatswa. Cheka nyama kuita zvidimbu zvitete, cheka zviyo (usacheka pamwe chete nezviyo) kuitira kuti kana uchikurudzira-kukangwa nyama yemombe haisi yakaoma. Inofanira kusarudza nyama ine zviyo zviduku, haifaniri kushandisa zviyo zvakakura kana ichikurudzira-frying nyama inenge yakaoma.
Nzira yekuita marinate: Marinate nyama negariki yakakanyiwa, ginger yakapwanyika, chili, munyu, mhiripiri, soy muto, mafuta ekubikisa. Garlic, ginger, chili uye mhiripiri zvinowedzera kunaka kune nyama yemombe. Soy muto uye zvinonhuwira zvinoita kuti nyama ive inonaka. Mafuta ekubikisa achabatsira nyama yemombe kuti ive nyoro, kunyanya isina mvura.
Marinating nguva: Nyama yemombe yekuvhenganisa-fry ndiro inofanira kuiswa marinated kwemaminitsi gumi nemashanu. Usafambisa nyama yemombe kwenguva yakareba, ichaita kuti nyama isvibe kana yakakangwa. Iwe unogona kufambisa nyama yacho uye woiisa mufiriji kuti iite nyoro uye inonaka.
3. Kugocha nyama yemombe nyoro pasina kutsenga
Iyo yakareba nyama yemombe yakakangwa, yakanyanya kuoma, saka kana ichisveta-frying, regai kupisa kuve kwakakwirira, simbisai nokukurumidza kusvikira nyama ichangobikwa, uye bvisa moto.
Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge zvichinyungudusa, simbisa-fry nyama yemombe kutanga, wozosimudzira-fry zvimwe zvese zvinoshandiswa wobva wawedzera nyama yemombe.
Kana iwe uchida kuti nyama yemombe ive nyoro, marinate isati yabika uye teerera kuwedzera mafuta mashoma, nguva yakakodzera inenge 20-30 maminitsi e marinade.
Heino nyama yemombe inonaka yakakangwa Digifood Blog share newe. Kubva pano, hauchashamisi “Chii chakanaka nenyama yemombe yakakangwa?” kana mukicheni zvakare, handiti? Tariro iwe uchawana yako yaunofarira nyama yenyuchi-fry recipe uye usakanganwa kuongorora zvinonaka ndiro kubva nyama yemombe kubika, kunakidzwa nemhuri uye nevadikanwi.
READ Tổng hợp 20 món canh ngon dễ ăn, dễ làm cho mùa hè | Excitinghochiminhcity
← “Bỏ túi” bản đồ miền Tây cho bạn một hành trình du lịch đáng nhớ | Excitinghochiminhcity
Hướng dẫn cách build Beidou Genshin Impact chi tiết cho người mới | Excitinghochiminhcity →